"पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई दण्डको भागिदार बनाउने कार्यमा प्रहरी लागिपरेको छ": एसपी पाण्डे
बलिराम यादव , २०७७ चैत ३, मङ्गलबार,०८:४०:AM
पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वेलबहादुर पाण्डेले अपराधको सन्दर्भमा कसैले भनेर वा नभनेर तलमाथि हुने गलत भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि घटनामा प्रहरीले पीडित कै पक्षमा काम गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्रहरीबाट सेवा पाउनको निम्ति सर्वसाधारण नागरिकहरुले सिधै आफू नआई समाजका ठुलाबडालाई लिएर गएमात्र प्रहरीले आफ्नो कुरो बढी सुनिदिन्छ भन्ने गलत भ्रम धेरैमा रहेकोले त्यसता भ्रममा नपर्न उनले सुझाव दिएका छन् । समाजमा हुने कुनै पनि अपराधका कार्यहरु प्रहरीको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले त्यसका सवालमा जोसुकै व्याक्ति वा पीडित निसंकोच, ढुक्ककासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य मातहतका कार्यालयमा आएर आफ्ना कुरा राख्न आग्रह पनि गरेका छन् । उनले आफू जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा आएको दुई महिना मै ३ करोड भन्दा माथि मूल्य बरबरको अवैध समान बरामद गरी चोरी तस्करी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । उनै प्रहरी प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेसंग पर्सा जिल्लाको आपराधिक गतिविधि तथा चोरी तस्करी बारे गोठालो खबरको लागि बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रश्न: यहाँ पर्सा जिल्लामा आएदेखि आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न के के गर्नु भएको छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: पर्सा जिल्लामा आएको दुई महिना हुन लाग्यो । प्रहरीले निरन्तर रूपमा जे गर्नु पर्ने हो त्यही कामलाई अगाडी बढाएको छ ।
हामीसंग भएको स्रोत साधन तथा जनशक्ति जे जति उपलब्ध छन्, सोहि अनुरुप काम प्रहरीले गरिरहेको छ र त्यही अनुसार मैले पनि कार्य गर्दै गरेको छु । अपराध नियन्त्रण गर्ने र भएका अपराध बारे सफल अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्डको भागिदार बनाएर पूर्ण अपराध नियन्त्रण गरेर शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउने काममा हामी निरन्तर लागेका छौ । यसमा सोची बिचारी योजनाबद्ध तरिकाले हामी लागेका छौँ र त्यसको असर तथा प्रभाव सकारात्मक पर्दै गईहेको छ ।
प्रश्न: पर्सा जिल्लामा कस्ता किसिमका आपराधिक गतिविधिहरु बढी हुने गरेको छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: पर्सामा १०७ किलो मिटर खुल्ला सीमाना रहेकोछ । त्यहाँबाट धेरै जसो चोरी तस्करी हुने गरेको छ। यो बाहेक जिल्लामा विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापहरु पनि हुने गरेका छन् ।
पर्सा जिल्लामा हत्या-हिंसा, महिला तथा बालबालिका बिरुद्धको अपराध, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, लागुऔषध र भारतबाट आउने औषधीजन्य लागुऔषध र नेपालबाट जाने गाँजाजन्य लागुऔषध, हुन्डी कारोबार र सुनचाँदी तस्करी लगायतका अपराध बढी मात्रामा रहेका छन् भने म यहाँ आए पश्चात् दुई महिनाको अवधिमा कार्य संचालन गरेको अपरेशनबाट देखिएको छ। उक्त अवधिमा मैले गरेको कार्यको तथा त्यस्ता गतिविधि विरुद्द गरेकोअपरेशनबाट सकारात्मक प्रवाभ परेको पाएको छु । हालसम्म प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरी आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरेको छ र आगामीदिनमा समेत नियन्त्रण गर्न निरन्तर लाग्ने छ ।
प्रश्न: अझै पनि लुकिछिपी हुने चोरी तस्करी र अपराधका घटना भइरहेको छन्, यस्ता गतिविधिहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ? यसमा क-कसको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: हामीले जनताबाट सहयोगको अपेक्षा खोज्ने हो । किन भने समाजमा नै सबै अपराध हुन्छ । अपराध विहीन समाजको कल्पना गर्न सकिन्न । अपराधका घटना जसरी हुन्छ र जो-जो जसरी संलग्न हुन्छन् ती सबै विषय प्रहरीमा आउँदैन ।
समान्यतया के भनिन्छ भने ४० प्रतिशत आपराधिक घटनाहरू प्रहरी नोटिसमा आउँछ र कारबाही प्रक्रियामा जान्छ । तर ६० प्रतिशत कानुनी प्रक्रियामा प्रहरी जानकारीमा आउँदैन भन्ने छ । त्यस कारण जे-जे अपराधका घटनाहरू छन्, त्यसलाई प्रहरी जानकारीमा ल्याउने र फौजदारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा लाने नै हुन्छ । त्यसका लागि हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।
प्रश्न: लागुऔषध सेवन र कारोबारमा संलग्न युवा जमातलाई नियन्त्रण गर्न के-के गर्नु भएको छ? र अन्यलाई यस्ता कुलतमा फस्न नदिन यहाँको योजना के छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: यो बढो ठुलो गम्भीर विषय हो । मैले कानुले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यस्ता गतिविधिको नियन्त्रणमा प्रयासरत छु। यस सम्बन्धमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३० को उलङ्घनको सन्दर्भमा लागुऔषधको सेवन, लागुऔषध ओसारपसार, उत्पादन, भण्डारण लगायतको सन्दर्भमा हामी कानुन बमोजिमको कारबाहीमा अगाडी बढ्छौं । यो संगसंगै यस्ता गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण पनि गरेका छौं।
हाम्रो काम र कारबाहीको प्रकृयाले मात्रै लागुऔषध कारोबार वा सेवनमा गर्ने युवा जमातलाई रोक्न सकिँदैन । यसमा सचेतनाको पनि आवश्यकता छ । हामीले सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू मार्फत र अन्य क्लब, स्थानीय समुदायहरू मार्फत पनि सचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि लागेका छौं । यो दोहरो प्रकृयाबाट प्रहरीले कारबाही सञ्चालन गरेर जो दोषी छ त्यसलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रियामा लान्छौं । विभिन्न संस्था, क्लबहरू मार्फत स्कुल, कलेज र समुदायमा गएर प्रहरीले लागुऔषध कारोबार र सेवनमा मान्छे नजाउन्, संलग्न नहोउन् भन्ने हिसाबले सचेतना गराउने काम निरन्तर गर्दै आएको छौं । लागुऔषध सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि हातोमाले गरी काम गरिरहेका छौं तर यसका बाबजुद पनि समस्या चाहिँ दिनप्रति दिन बढ्दो छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रश्न: कतिपय पीडितहरू प्रहरीसंग डराएर पनि न्यायको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिधै नगएर नेता वा अन्यको साहाराको भरमा आउने गर्दछ? यस बारे के भन्नु हुन्छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: पीडित त आफै आउनु पर्ने हो । पीडित कसैको माध्यमबाट आउने पनि होइन । प्रहरीमा पीडित चौबिसै घण्टा वा जुन समयमा पनि आउन सक्छ । पीडितहरु प्रहरीकोमा कसैको साहारा नलिई आफै आइदिए म बढी खुसी हुन्छु । हामीले सधैं पक्ष लिने भनेको पीडित कै हो । यसमा कतिपय केही मान्छेको माध्यमबाट आउँछन् त्यो सही होइन ।
समाजमा हुने कुनै पनि अपराधका कार्य जो प्रहरी कार्यसंग सम्बन्धित छ अथवा प्रहरी कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ त्यसका सवालमा कुनै पनि वर्गका पीडित निसंकोच, बेझिझक जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा आएर आफ्ना कुरा राख्न सक्नु हुन्छ । त्यो विषय अनुसार हामी कार्य गर्छौ र गरिरहेका पनि छौं । तर केही केही मान्छेहरूमा ठुलाबडालाई भनसुन गराएर गए मात्र भने पुलिसले अलि बढी सुनिदिन्छ कि भन्ने गलत भ्रम हटाउनु पर्छ। कसैको आँड लिएर गए मात्र प्रहरीले बढी कुरो सुनिदिन्छ भन्ने गलत भ्रममा नपर्दा हुन्छ । किन भने अपराधको सन्दर्भमा कसैले भनेर वा नभनेर तलमाथि गर्ने छुट हामीलाई छैन ।
प्रश्न: पर्सा जिल्ला खुल्ला सीमाना हो, यहाँ बालुवादेखी पोके समेत तस्करी हुने गरेको आरोप छ, कतिको चुनौतीपूर्ण छ पर्सा जिल्ला ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: खुल्ला सीमानाका कारण जोखिमहरु बढी नै रहेको छ। हाम्रो कोसिस चोरी तस्करीलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने हो । खुल्ला सिमाना भए पनि त्यस्ता तस्करी हुन सक्ने ठाउँहरूमा प्रहरीले कडा निगरानी गरिरहेको छ र यसमा हामी सफल भएका छौं ।
प्रश्न: तर पर्सा प्रहरी तस्करदेखि सीमा आवतजावतको सुरक्षामा समेत सक्षम हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दो छ? यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: जनगुनासो छदै छैन । म आइसकेपछि ३ करोडभन्दा बढीको समान समातेका छौं । घरायसी प्रयोजनको लागि २/३ केजी चिनी लिएर आउने व्यस्था मूख्य नाकाबाट पनि छ । त्यो अवस्था बाहेक गलत ढङ्गले हुने तस्करी कार्यको विरुद्धमा छौं । तस्करी हुन नदिन सबै ठाउँमा कडाई गरिएको छ ।
प्रश्न: खासगरि माथिल्लो तहका प्रहरीहरु बदनामीबाट बच्ने तर तल्लो तहका प्रहरीहरु बढी बदनाम हुने गरेको देखिन्छ ? पर्सा प्रहरी कार्यालयलाई बदनाम गराउने प्रहरीलाई यहाँको पालामा कस्तो कारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: गुनासो र आरोप रहने कुरा एउटा पाटो भयो । जब कुनै पनि तहको कर्मचारी गलत कार्यमा संलग्न भएको सबुत प्रमाण पुग्छ भने हामीले त्यही कसुरमा विभागीय कारबाही गर्छौं ।गलत कार्यमा संलग्न नहुन हामीले निरन्तर मातहतका युनिट र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छौ । काममा सुधार पनि आएको छ । तर त्यस्तो कारबाही नै गर्न पर्ने अवस्था हाल सम्म देखेका छैनौँ ।
प्रश्न: मुलुकको राजश्व छली गरी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने माफियाहरूलाई तह लगाउन यहाँले कस्तो रणनीति बनाएर अगाडी बढ्दै हुनुहुन्छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: त्यो त सहि हो, सीमामा हुने चोरी तस्करीले निश्चय नै अर्थतन्त्रमा यस्ता गतिविधिले असर त पर्छ नै । जसरी भए पनि हामी यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण गर्छौ । त्यसमा हामी मात्रै होइन, सीमा सुरक्षामा खट्ने सशस्त्र प्रहरी पनि छ । हामी जहाँ-जहाँ र जुन नाकामा छौं । हाम्रो मूख्य कर्तव्य गलत हिसाबले हुने गतिविधि रोक्ने हो । चोरी तस्करी नियन्त्रण गरेर राजश्व छलीमा हुनबाट बचाउने र राजश्वमा योगदान गर्ने हो र त्यो रोक्ने हाम्रो ड्युटी पनि हो । हामी लागेका छौं । जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलसंग जिल्लामा पनि छलफल र समन्वय हुन्छ र युनिट वाईज पनि हुन्छ । हामी जहाँ छौं, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी पनि छ । कार्यगत र सैद्धान्तिक हिसाबमा जिल्लामा समन्वय र सहकार्य छ र हाम्रो काम प्रभावकारी ढङ्गले नै अगाडी बढेको छ ।
प्रश्न: अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
एसपी, वेलबहादुर पाण्डे: सीमामा हुने अपराध वा जिल्ला भित्र हुने कुनै पनि गलत कामकारबाही अथवा आपराधिक क्रियाकलाप जो-कोहिले तत्काल छिटोभन्दा छिटो प्रहरीलाई जानकारी दिनु भयो र प्रहरी कार्यमा सूचना वा अन्य काम कारबाहीले सहयोग गरिदिनु भयो भने अपराध नियन्त्रण गर्ने काममा त्यसले योगदान गर्छ र त्यो योगदान भनेको अन्ततः त्यही समाजमा रहेको व्यक्तिलाई नै लाभ हुने हो ।
जब समाज सही र चुस्त दुरुस्त हुन्छ, गलत मान्छे रहँदैन तब त्यो स्थानमा लायक समाज हुन्छ । सभ्य र बस्ने लायक समाज बनाउने नै हाम्रो भूमिका हुन्छ । त्यसको लागि हामीले जनताको नै सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखेका छौं ।